Amanzi ashisayo ezempilo - indlu yase-Marija - I-Airbnb
Amanzi ashisayo ezempilo - indlu yase-Marija
Topusko, Sisak-Moslavina County, i-Croatia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Suncana
U-Suncana unokuphawula okungu-26 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Suncana izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi lisesimweni esingu-200 m amachibi ashisayo kanye nesikhungo se-Topusko. Idolobha lase-Topusko lingamakhilomitha angu-80 ukusuka e-Zagreb futhi lingamakhilomitha angu-50 e-Karlovac. I-Topusko yaziwa ngamanzi aphilisayo amaminithi amahle kakhulu aphuma ngo-1500 m ukujula.
Iyindawo ebaluleke kakhulu ngokomlando:
- imizila yokuqala yabantu endaweni ye-Topusko yatholakala cishe ku-2,500 B.C.
- ukuthuthukiswa kwangempela kwe-Topusko kuqala ngemva kokufika kwemibono. Bakha izinhlawulo zabo zokuhlala ngekhulu
le-1St - ku-1892 Topusko ngokokuqala ngqa kushiwo njengomthombo wamanzi ashisayo
Ifulethi lisendaweni yaphansi esanda kwakhiwa eyizisekelo zokushintshwa nokulungiswa kwendlu endala yokhuni (isitezi sokuqala). Nakuba isembindini kakhulu izungezwe yimvelo, indlu yokuqala engumakhelwane ingamamitha angu-40 ukusuka. Yindawo ekahle kakhulu yeholide elinempilo.
Ifulethi elingu-40 m2 lisha futhi linakho konke okudingekayo (i-TV, ikhishi: ifriji, i-microwave). Isendaweni ephansi, ilungiselelwe ngokuphelele abantu abakhubazekile ngezindinganiso ze-EU. Iqukethe igumbi lokuphumula elinekhishi, igumbi lokulala kanye negumbi lokugezela elivulekile elineshawa.
Kunezindlela eziningi zokuhamba ngezinyawo nezamabhayisikili eduzane. Inkaba ye-Topusko enokuthula enezinkantini, izitolo, amakhemisi, izindawo zokudlela, ipaki elidala elihle nemininingwane yezokuvakasha ingamamitha angu-250 kuphela.
Kukhona isiteshi sebhasi esingu-250 m kude. Ukuhlala okuncane kungubusuku obungu-3. Uma intengo encane ingu-30% ngaphezulu